Telehealth - Introducing Our Specialists - Ministry of Health (MOH) Myanmar
A collection of videos and poster resources to help you stay informed and share important messages.
စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကို အခမဲ့ (အခမဲ့) တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်
စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကို အခမဲ့ (အခမဲ့) တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် 👉 အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှု တယ်လီကျန်းမာ ဆေးခန်း (MOH) https://facebook.com/telehealthmm 👉 အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊...
ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောပြဿနာတယ်လီကျန်းမာမှာ အဖြေရှာ====================== တစ်နေ့……..“ခေါင်းတွေကိုက် စိတ်တွေရှုပ် ခေါင်းမူးလိုက်တာ အေ”“ဟုတ်ပ…..ငါ့မှာလဲ နေ့တိုင်း အကြောတက်လို့ နင်းနှိပ်နေရတာ”“အမယ်လေး နင်တို့ထက် ငါက ပိုဆိုး ! ခဏခဏ သတိမေ့နေလို့ဟယ်”“ညည်းတို့လိုတော့...
Eye specialistနှင့်ပြသနိုင်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း
“တယ်လီကျန်းမာအွန်လိုင်းဆေးခန်းမှာ မျက်စိကျန်းမာရေးပြဿနာများလည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပြီ (၆-၁၂-၂၀၂၁)” မျက်စိဆရာဝန်​ ကြီးများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း တယ်လီကျန်းမာအွန်လိုင်းဆေးခန်းများတွင် လူနာများအား အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် စီစဥ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။လူကိုယ်တိုင် ​ဆေးရုံ​ဆေးခန်းပြသဖို့ခက်ခဲ ​နေသူများ အတွက်...
“တယ်လီကျန်းမာအွန်လိုင်းဆေးခန်းမှာ နှလုံးကျန်းမာရေးပြဿနာများလည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပြီ (၁-၁၂-၂၀၂၁)” နှလုံးအထူးကုသမားတော်ကြီးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း… တယ်လီကျန်းမာအွန်လိုင်းဆေးခန်းများတွင် လူနာများအား အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် စီစဥ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ လူနာများအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာများ...
Dental Surgeonနှင့်ပြသနိုင်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း
တယ်လီကျန်းမာ အွန်လိုင်းဆေးခန်းတွင် သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေး​ပြဿနာများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီ (၂၈-၁၁-၂၀၂၁ ) *သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါ ဝေဒနာများအတွက် လတ်တလော အခြေအနေအရပ်ရပ်တခုခုကြောင့် သွားဆေးခန်း၌ ကုသမှုခံယူရန် မပြနိုင်ခင် သွားကျန်းမာရေးအတွက်...
“တယ်လီကျန်းမာအွန်လိုင်းဆေးခန်းမှာ ခွဲစိတ်ရမည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများလည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပြီ (၁၆-၁၁-၂၀၂၁)” ခွဲစိတ်ဆေးခန်းတွင် ပြသခြင်း “စုစု” ဆိုသော လူနာတစ်ဦး ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် ကုသမှုခံယူချင်သောအခါ… စုစု >> မင်္ဂလာပါရှင့်…တယ်လီကျန်းမာမှာ...